အမှန်အကန်လား..အကြံအဖန်လား ??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အမှန်အကန်လား..အကြံအဖန်လား ???
Posted by may july on Apr 30, 2012 in Copy/Paste | 22 comments
ကဲ ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ကြစို့နော် …
ဒီပုံလေးကတော့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ မြောက်ဒဂုံဘေလီတံတားအဆင်း ၃၅ မှတ်တိုင်နားမှာ ပရိတ်ရွတ်ရန် ပြင်ဆင်နေချိန်၊ ကင်မရာစမ်းတုံး ပေါ်လာတဲ့ပုံပါတဲ့..
လူတွေပြောပုံအရ ၄င်းဝိညဉ်သည် လွန်ခဲ့သည့် ၄ – ၅ လလောက်က ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကားတိုက်ခံပီး သေဆုံးသွားတဲ့ ပုံနဲ့ တစ်ထပ်တည်း တူနေပါသတဲ့ …
အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ကျောင်းသူလေးသေဆုံးနေတဲ့ပုံကို အင်တာနက်မှာမြင်လိုက်ရဘူးပါတယ် … ခေါင်းက ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်..
ဒါပေမယ့် ခု မြင်လိုက်ရတဲ့ ၀ိညဉ်ပုံကတော့ ကျောင်းသူလေးပါလို့ လူတွေက တစ်ထစ်ချပြောရလောက်အောင် တူနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ..
အဲတော့ ဒီပုံလေးဟာ အမှန်အကန်လား .. ကင်မရာမင်းတွေရဲ့ အကြံအဖန်လားဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး..
လူတွေအားလုံး ကတော့ တကယ်ထင်နေကြတယ်ပေါ့နော်…
ဂျူးမလည်း ဓါတ်ပုံလေး တွေ့တော scan ဖတ်ပီး ယူကြည့်တာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ မသိပါဘူး…
သူငယ်ချင်းတို့တွေလည်း ဝေဖန်ကြည့်နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
ကောင်းကင်တော့ အကြံအဖန်လို့ ထင်တာပဲ..။ထိုင်နေတဲ့လူကြီးရဲ့ အကျီင်္အောက်နားစပါ ၀ါးနေတယ် မဂျူးဂျူးရဲ့…..။ ကောင်းကင်တော့ သိပ်မကြည့်တတ်ပါဘူး…။ Photoshop ကျွမ်းတဲ့လူတွေက ပိုနားလည်မယ်ထင်တယ်…။
ဟုတ်ပါတယ်ညီမရယ်.. လူတွေကတော့ တကယ်ကြီးထင်နေကြတယ်လေ…
အဲဒါကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ချင်လို့ပါ …
ဂျူဂျူမ ရေ … အဲဒီ ပုံထက် ပိုစိတ်ဝင်စားမိတာ က ညလေးအိတုံ ဆိုတာပါဘဲ ။
အဟီး .. အကြံဖန်ဖြစ်ဖြစ် အမှန်ကန်ဖြစ်ဖြစ် .. ကြည့်ဖူးတယ် ရှိအောင် လာကြည့်လိုက်ပါတ ယ်နော် အဟဲ .. ။
ရွာထဲက ကင်မရာမန်းများဖြစ်တဲ့ အင်ဇာဂီ၊ဦးပေါက်နဲ. Diamond Key တို.ကိုမေးကြည်.ပါလား…
Ghost Protocol Function ပါထဲကင်မရာနဲ.ရိုက်ထားတာလားမသိဝူး ဖောကြည့်တာနော်
အတိအကျသိဝူး Photoshop နဲ.လဲဖြစ်နိုင်တာပဲ ကျိန်းသေတာကတော့အစစ်လုံးဝဟုတ်ဖူး
ဆိုတာပဲ။ရွာထဲမှာ ကင်မလာမန်း အကို အမကြီးများရှိပါ၏။
အခုခေတ်က… လူမပါတဲ့ မောင်းသူမဲ့ လေယဉ်တောင် လုပ်နိုင်ပြီဘဲ… ရဟန္တာ အတုလုပ်ပြီး ကောင်းကင်ကို
ပြန်ခိုင်းပြီး မြန်မာပြည်မှာ လုပ်စားရင်တော့..ဘီလျံနာ သူဋ္ဌေးဖြစ်မယ် ထင်တယ်နော်….
ပျံ စာလုံးလေးမှားသွားလို့ sorry နော်….
ဒါ့ပုံထဲမှာ သရဲပုံတွေ ထည့်တာ
ခုတစ်လော ခေတ်စားနေတယ်ဗျ ..
ကျနော်လည်း “ဓာတ်ပုံထဲက သရဲမ” ဆိုပြီး ပို့စ် တင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ..
လူတွေ စိတ်ဝင်စားအောင် အကြံအဖန် လုပ်ထားတာတွေလို့ပဲ
ကျနော်ကတော့ ထင်တယ် ..
ကျွန်တော်တို့ ဂေဇက်ရွာသူ..ရွာသားများရဲ့ စဉ်စားဝေဖန်မှုတွေကို မြင်ရ ကြားရ သိရတော့ ကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းသာမိသလို…ကျွန်တော်တို့ ဂေဇက် ရွာကိုလာခဲ့ရကျိုးလဲ နပ်တယ်လို့ပြောရမယ်။ ကိုကြီးကြောင်တို့…ညီလေး အောင်ပုတို့ သူကြီးတို့တော့မတွေ့မိဘူး။ ကျန်းမာရေးများ ဖောက်နေကြသလားမသိဘူး။ စိတ်ပူမိလို့ပါ။
မောင်ရင် မသိဘူးထင်တယ် ..
ဖင်ဖူးတောင်း ထောင်ပြီး အိပ်တုန်း ရှိသေးတယ်ဟ ..
နောက်ထှာ .. ဂယ်ပါ .. :D
Photoshop နဲ့ ပြင်ထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော့ အတွေ့အကြုံ အရ အလင်းရောင်ပြန်ခြင်း၊ (ကင်မရာ မှန်ဘီလူးပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် အလင်းရောင်တစ်ခုခု ကျနေခြင်း သို့မဟုတ် မှန်ဘီလူးပေါ်မှာ တစ်စုံတစ်ခု ကပ်နေခြင်း လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကြုံရဘူးတာက ဂျပန်စစ်ပြန် မိသားစုဝင်များ ကျဆုံးခဲ့သူများကို လာကန်တော့တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံ ရိုက်တုန်းကပါ။ ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဓတ်ပုံထဲမှာ အဖြူရောင် အခိုးအငွေ့တွေ အတော် များများ ပေါ်နေတာမျိုး တွေ့ရပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်တော့ သူတို့ ထွန်းထားတဲ့ အမွှေးတိုင်ကလာတဲ့ အငွေ့တွေလား လို့တော့ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ ဓတ်ပုံရိုက်နေတုန်းကတော့ ဒီအမွှေးတိုင်အနံ့ ၊ မီးခိုးတို့ကို သတိမပြုမိဘူးလေ။ အဲဒီ ဂျပန်တွေကိုတော့ ဓတ်ပုံ မပြလိုက်ပါဘူး။ တော်ကြာ သူတို့ကပါ ဟိုထင်၊ ဒီထင် ဖြစ်မှာစိုးတာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခု စဉ်းစားရမှာက ခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ အတည်ပြုလို့မရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေလည်း ရှိတတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုပါ။
crack version မဟုတ်ဖူး.. စီရီရယ်လိုင်စင်နံပါတ်ပါရှိတာ..။
haha မေးစ၇ာတောင်မလိုပါဘူးဗျာ CS3 နဲ့ထောင်ထုလို့၇တယ် ပုံအောက်အနားသတ်ကြည့်က ဒုံးပြတ်ကြီး
အဲ့ဒါ crop လုပ်တားတဲ့ပုံကို Layer ထပ်လိုက်တာ သို့မပာုတ် brush tool သုံးထားတာဗျာ အဲ့လူကျောကုံးပေါ်မှာအ၇မ်းထင်းနေတော့ blur tool နဲ့ ပြန်ဝါးလိုက်တာပေါ့ အဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်ညီ ၄တန်းတောင်လုပ်တတ်တယ် သိတယ်။ နောက်တစ်ခုသိတာကတော့ ဒီ ပုံလုပ်ထားတဲ့ကောင်က အခုမှ Beginner အဆင့်တောင်မ၇ှိသေးဘူးဗျ
ပုံက တော့ အင်ပဲ သေချာတယ် လုပ်တဲ့ သူက သိပ်မလုပ်တဲ့သေးဘူး ။ အမှားတွေ အများကြီး တွေ့ရသေးတယ် ။ တော်တော်လေး လုပ်တက်တဲ့ သူသာဆို တော်တော်လေး ကို အစစ်လားအတုလား ခွဲ ဖို့ ခက်မယ် ။
ဒါမျိုးတွေ.မြင်ရတာတော့..သဘောကျတယ်. ။ ထူးခြားတာလေးတွေ.ကိုး။
ကျွန်တော်က သ၇ဲ.ကား.ဆို အရမ်းကြိုက်တာလေ.။
Wa ha ha,hee hee, ho ho.It’sareal fake.That’s too funny.He’s not good at making fake photos.